တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလြ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၀
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ သြစတြေးလျ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့် H.E. Ms. Andrea Faulkner အား ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးထွဋ်၊ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေးနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ စစ်သံမှူး Colonel Paul Bruce နှင့် တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာ-သြစတြေးလျနှစ်နိုင်ငံသည် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးချိန်မှ စ၍နှစ်ပေါင်းများစွာ သံတမန်ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ဘာသာစကား သင်တန်း၊ ကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေး ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသင်တန်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး တန်ပြန်နှိမ်နင်းမှု သင်တန်းနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသင်တန်းများ စသည့်လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပညာရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများအပါအ၀င် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တပ်မတော်မှ ဆောင်ရွက် နေမှုအခြေအနေများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသ တွင်ဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် ဘင်္ဂါလီအရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစိုးရနှင့်တပ်မတော်မှဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်းဆောင် ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေများနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံမှ ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြသည်။
နပွေညျတျော၊ ဖဖေျောဝါရီ – ၂၀
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ မွနျမာနိုငျငံ ဆိုငျရာ သွစတွေးလြ နိုငျငံသံအမတျကွီးအဖွဈခနျ့အပျခွငျးခံရသညျ့ H.E. Ms. Andrea Faulkner အား ယနေ့ မှနျးလှဲပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဘုရငျ့နောငျရိပျသာဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ ဒုတိယ ဗိုလျခြုပျကွီး စိုးထှဋျ၊ ဒုတိယဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျအေးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံ သံအမတျကွီးနှငျ့အတူ စဈသံမှူး Colonel Paul Bruce နှငျ့ တာဝနျ ရှိသူမြား တကျရောကျ ကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာ-သွစတွေးလနြှဈနိုငျငံသညျ လှတျလပျရေးရရှိပွီးခြိနျမှ စ၍နှဈပေါငျးမြားစှာ သံတမနျဆကျဆံရေးကောငျးမှနျခဲ့မှုအခွအေနမြေား၊ ဘာသာစကား သငျတနျး၊ ကုလသမဂ်ဂငွိမျးခမျြးရေး ထိနျးသိမျးမှုဆိုငျရာသငျတနျး၊ မူးယဈဆေးဝါး တနျပွနျနှိမျနငျးမှု သငျတနျးနှငျ့ဆေးဘကျဆိုငျရာသငျတနျးမြား စသညျ့လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံ၏ပွညျတှငျးငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ ပညာရေး၊ စီးပှားရေးကဏ်ဍမြားအပါအဝငျ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားတှငျ သွစတွေးလနြိုငျငံမှ ကူညီဆောငျရှကျပေးနမှေုအခွအေနမြေား၊ မွနျမာနိုငျငံတှငျ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေးရရှိရနျအတှကျ တပျမတျောမှ ဆောငျရှကျ နမှေုအခွအေနမြေား၊ ရခိုငျပွညျနယျမွောကျပိုငျး ဘူးသီးတောငျ၊ မောငျတောဒသေ တှငျဖွဈပှား ခဲ့သညျ့ ဘင်ျဂါလီအရေးကိစ်စနှငျ့ပတျသကျပွီး အစိုးရနှငျ့တပျမတျောမှဥပဒနှေငျ့အညီ ဖွရှေငျးဆောငျ ရှကျခဲ့မှု အခွအေနမြေားနှငျ့ သွစတွေးလနြိုငျငံမှ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေားအား ရငျးနှီး ပှငျ့လငျးစှာဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သွစတွေးလနြိုငျငံသံအမတျကွီးအား အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွသညျ။
မေ ၃၊ ၂၀၁၈ Admin 0